Senetka Mareykanka oo ansixiyay dhaqaale lagu caawinayo shacabka dalkaas | Xaysimo
Home War Senetka Mareykanka oo ansixiyay dhaqaale lagu caawinayo shacabka dalkaas
Lacagtan oo gaareysa 1.9 tiriliyan oo ay taageereen 50 xubnood oo katirsan aqalka Senetka ee dalka Mareykanka ayaa haatan loosii gudin doonaa aqalka wakiilada, halkaas oo iyaguna la filayo inay ansixiyaan.
Lacagahan kabka ah ayaa waxaa u ololeynayay madaxweynaha dalka Mareykanka, Joe Biden haseyeeshee xisbiga Jamhuuriga ayaa cambaareeyay arrinkan, iyagoona sheegay in lacagtu ay aad u badan tahay.
Barnaamijkan gargaarka ayaa sidoo kale waxaa kamid ah lacag dhan 1,400 oo doollar oo qofka la siinayo mar qura. Dhibaatada ka dhalatay xanuunka Corona ayaa waxaa dalka Mareykanka ugu dhintay 523 kun oo qof halka uu sidoo kale ku dhacay dad gaaraya 29 milyan.
Shaqo la’aanta dalka Mareykanka ayaa gaartay 6.2 boqolkiiba dadka ku nool dalkaas.
Muxuu yahay barnaamijkan gunti-giijiska?
Afartan iyo sagaal bilyan oo doollar oo kamid ah barnaamijkan gunti-giijiska ayaa sidoo kale wax looga qaban doonaa baaritaanada iyo cilmi-baarisra la xiriirta Corona halka 14 bilyan na lagu kharash gareyn doona bixinta tallaalka cudurka.
Barnaamijkan uu meel mariyay aqalka sare ee Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa kamid ah lacago deeq ah oo lasiin doona ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn oo ay kamid yihiin shirkadaha waaweyn ee uu saameyay xanuunka.